DAAWO: khilaafka Baarlamaanka Oo Halkii Hore ka sara maray & Maalinta arbacada Oo badashay malinkii sabtiga” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
muqdisho (mareeg news) khifka malamhaan Kadhex aloolsanaa xildhibaanada baarlamaanka federalka soomaliya oo u muuqday mid xal laga gaaray kadib soo galidii madaxweyne farmaajo ayaa hada waxaa soo if baxaya in xaalka sidiisa yahay welina uu xaalka tagaanyahay.
warqad uu soo saaray gudoomiye ku xigeenka kowaad ee barlamaanka Mudeey uuna xilka kaga joojinaayay xog haya Baarlamaanka ayaa waxaa isna waxba kama jiraan ku tilmaamay gudoomiye ku xigeenka sedexaad Ee baarlamaanka Mud cawad.
dhanka kale xildhiba fiqi oo la hadlay warfaafinta ayaa sheegay in soo kale dhex gelitaanka madaxweynaha uuna wax kabadalin xaalka khilaafka wax wanaagsan ay ka soo yeerenin xafiiska madaxweynaha waxuu kaloo mud fiqi soo hadal qaaday in madaxweynaha uu dhageysanaayo hadalka xukuumada ee ah lama shaqeey karno baarlamaanka
khilaafka xildhibaanada ayaa cuuryaamiyay dhamaan Howlaha dowlada Madaxweyne Farmaajo oo maalinti shalay aheed lakulmay wufuud ka socotay QM iyo midoowga afrika ayeey wararku sheegayaan ineey ka codsadeen in uu Si muuqata u dhax galo khilaafka baarlamaanka oo ay xukuumadu Qeeyb ka tahay.
Xeer ilaalinta oo shalay soo saartay warqad cadeeyneysa hanti lunsasho lagu eedeey hoggaanka baarlamaanka ayaa iyadana u muuqata arin Dabka sii shideeyso.
xubnihii aqalka sare ee U xilsaareen Xalinta khilaafka iyana weey is casileen waxeeyna sheegeen in ay jirto is horistaag iyo isu tanaasul la’aan ka taagan Xubna khilaafka.
NUSOJ oo tababar u furtay Wariyeyaasha ka howlgala Gaalkacyo +SAWIRRO